नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : कठै यि निर्दोसहरुको यो कत्ले आम ! आखिर यो सब के का लागि ! मान्छे किन युद्ध निम्त्याउँछन ? किन लड्छन ? हेर्नुस् त यो ३ दिन अघिको भिडियो !!!
कठै यि निर्दोसहरुको यो कत्ले आम ! आखिर यो सब के का लागि ! मान्छे किन युद्ध निम्त्याउँछन ? किन लड्छन ? हेर्नुस् त यो ३ दिन अघिको भिडियो !!!
Posted by www.Nepalmother.com at 1:26 AM